Wiilka Jamal Khashoggi oo sheegay inuu cafiyay dadkii diley aabihiis - Awdinle Online
Wiilka Jamal Khashoggi oo sheegay inuu cafiyay dadkii diley aabihiis
Wiilka uu dhalay weriyihii la khaarijiyay ee Jamal Khashoggi ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inay cafiyeen dadkii ka dambeeyay dilka Jamal Khashoggi.
Qoraalkan oo lagu soo daabacay barta Twitterka maanta ayuu Salah Khashoggi ku sheegay in qoyskiisu ay cafiyeen dadkii diley aabahood 2018 xilli uu booqanayay qunsuliyada Sacudi Carabiya ay ku lahayd magaalada Istanbul.
“Habeenkan barakaysan oo ka mid ah bisha Ramadan waxaan xasuusanaynaa qowlkii Alle ee ahaa;Haddii uu qof cafiyo uuna heshiis sameeyo Alle ayaa u abaalgudaya,”
“Sidaa darteed Annagoo ah wiilashii Shahiidkii Jamal Khashoggi waxaan ku dhowaaqeynaa in aan cafinay kuwii diley aabaheen annagoo raadinaynaa abaalmarinta Alle.”ayaa la sii raaciyay qoraalka.
Jamal Khashoggi ayaa markii ugu dambeysey ee la arko waxaa uu galay gudaha qunsuliyada Sacudi Carabiya ee magaalada Istanbul,waxaana la aaminsan yahay in halkaa lagu diley jirkiisana la jarjaray oo aan la ogeyn illaa iyo hadda meel la geeyay.
Maxkamada Sacudi Carabiya ayaa shan ruux ku xukuntay dil halka saddex kalena xabsi ku xukuntay sababo la xiriira dilka Khashoggi.
Previous articleWasaaradda Caafimaadka Puntland oo baaritaan ku bilowday dadka kasoo labanaya dalka dibadiisa
Next articleSomaliland: Ictiraaf raadinteena waxaan gaynaynaa maxkamada ICJ